30 အိပ်နေသောကားများထုတ်လုပ်ရန်ဘူလ်ဂေးရီးယားမီးရထားနှင့်TÜVASAŞအကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာလောကဥရောပ35 ဘူလ်ဂေးရီးယားလှည်းထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယားမီးရထားနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးအတွင်းလူနာTÜVASAŞအကြား 30 ဆုံးရှုံးခဲ့ရသညျ!
လှည်းထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယားမီးရထားနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးအတွင်းလူနာTÜVASAŞအကြား 30 ဆုံးရှုံးခဲ့ရသညျ!
24 / 04 / 2012 35 ဘူလ်ဂေးရီးယား, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုစွန့်ပစ်ခံခဲ့ရအိပ်ပျော်နေသောများအတွက်လက်မှတ်ပေါင်း၏TÜVASAŞစုစုပေါင်း 17 2010 ယူရိုတန်ဖိုးရှိအကြားဒီဇင်ဘာလ 32.205.000 30 အတွက်ဘူဂေးရီးယားမီးရထားနှင့်အတူဘူဂေးရီးယားမြို့တော်ဆိုဖီယာ။
အကောင်းဆုံးကိုလေလံပေးခြင်းTÜVASAŞခရီးသည်တင်ကားများဝယ်ယူများအတွက်တင်ဒါအတွက်ဘူဂေးရီးယားမီးရထားအားဖြင့် 2008 30 အတွင်းလူနာများတွင်ကုမ္ပဏီတခုတင်ဒါခဲ့သညျ။
အတိတ်ကာလအတောအတွင်းကဇူလိုင်လအတွက်ဘူဂေးရီးယားမီးရထားအားဖြင့်တင်ဒါ၏ဖျက်သိမ်းခြင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဒီရှင်းပြချက်ဘူလ်ဂေးရီးယား၏အဓိပတိအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတရားရုံးအားမိမိအယူခံTÜVASAŞ, bulunarak ညာဘက်ပြီးနောက်ကဥပဒေဆန့်ကျင်သည်နှင့်အမှုကိစ္စနုဆုံးဖြတ်ချက်၏ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ဆိုလမ်းအတွက်အယူခံမနိုင်ပါ။ စာချုပ်များ၏လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲနှင့်အတူအဆုံးသတ်သောဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်မီးရထားများအကြားစေ့စပ်ညှိနှိုင်း, နေစဉ်အောက်တိုဘာလTÜVASAŞအတွက်ယူဆုံးဖြတ်ချက်ကအောက်ပါ။
မီးရထားပေါ်ဆိုဖီယာအတွက်ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်အတူဒီဇင်ဘာလ 17 2010 TÜVASAŞအကြားဘူလ်ဂေးရီးယားရဲ့မြို့တော်ထုတ်လုပ်မှုအိပ်ပျော်နေသောများအတွက်လက်မှတ်ပေါင်းတန်ဖိုးရှိစုစုပေါင်းအရေအတွက်က 32.205.000 30 ယူရိုထားကြ၏။
အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးအီဘရာဟင် Ertirya နှင့်အတူဤစာချုပ်သည်ကမ္ဘာ့သိပ္ပံနည်းကျနှင့်TÜVASAŞနည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှတစ်ပြိုင်နက်တည်း adapts တစ်ပြောင်းလဲနေသောဖွဲ့စည်းပုံမှာရရှိခဲ့၏ခေါင်းဆောင်မှု, တိုင်းပြည်အတွင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခေတ်ပြိုင်နှင့်ခေတ်ပေါ်ခရီးသည်တင်ကားများဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများသို့တင်ပို့ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအလွန်အရေးကြီးပါသည်သောဤဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုစက်ရုံနှစ်ဦးစလုံး, ကျေနပ်TÜVASAŞန်ထမ်းခဲ့သည်။
အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားများတွင်အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးအီဘရာဟင် Ertirya ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘူလ်ဂေးရီးယားနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏သဘောတူညီချက်၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်သူချင်းအီးယူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင် "ဟုပြောသည်။ ကျနော်တို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအားထုတ်မှုရဲ့ရလဒ်တယ်။
ဒါဟာသဘောတူညီချက်TÜVASAŞများအတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မီးရထား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူအပြိုင်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမူဝါဒမူဘောင်၌ကြီးသောခေတ်နှင့်အတူရထားလမ်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုန်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးငါးနှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ခဲ့တယ်။ "သူကဆိုသည်။
TÜVASAŞအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးအီဘရာဟင် Ertirya "တူရကီ, ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်ကိုယ်စားပေါ်ဤအကြောင်းနှစ်သက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၏နှစ်ဦးစလုံးလာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌ပြုသောအမှုခံရဖို့အလုပ်တစ်ခုမိတ်ဆက်စကားဖြစ်ပါတယ်TÜVASAŞနှစ်ဦးစလုံး" ဟုပြောသည်။ သူကအသစ်သောစီမံကိန်းများ၏အနာဂတ်များအတွက် signal ကို ပေး. , ကဆိုသည်။
လက်မှတ်ပေါင်း Rize ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုမှပစ်ချခံခဲ့ရ
ဒေသခံ tramcars များ၏ဝယ်ယူဘို့လက်မှတ်ပေါင်း Bursa (ဓာတ်ပုံပြခန်း) တွင်ပစ်ချခံခဲ့ရ
NEW လက်မှတ်ပေါင်း xnumx.havalim ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကုန်တင်စင်တာများအတွက် Karaman လက်မှတ်ပေါင်းပစ်ချခံခဲ့ရ
လက်မှတ်ပေါင်း Denizli OSB ရထားလမ်းမှပစ်ချခံခဲ့ရ
တင်ဆောင်လာသော YHT ရက်ကြာ 10 တထောင်ကလူ